Alahady – 17/08/2014 – Tenin’Andriamanitra – Ecar Sainte Anne Anjomakely
Ravehivavy, lehibe ny finoanao.
Tamin’izany andro izany i Jesoa, dia nankany amin’ny faritanin’i Tira sy Sidôna. Ary indro nisy vehivavy kananeana anankiray nivoaka avy tamin’izany tany izany niantsoantso mafy nanao hoe: “Mamindrà fo amiko, ry Tompo, Zanak’i Davida, fa ampijalian’ny demony mafy loatra ny zanako vavy”. Fa tsy namaly azy i Jesoa na dia indraim-bava aza. Dia nanatona niangavy taminy ny mpianany nanao hoe: “Roahy izy, fa mikiakiaka manaraka antsika”. Ary hoy ny navaliny azy: “Tsy nirahina afa-tsy ho an’ny ondry very amin’ny taranak’i Israely Aho. Fa nanatona ihany ravehivavy ka niankohoka teo anatrehany, ary nanao hoe: “Tompo ô! vonjeo aho!” Nefa novaliany hoe: “Tsy mety raha ny mofon-jaza no alaina ka atsipy ho an’ny amboa”. Ary hoy ravehivavy: “Marina izany, Tompoko, nefa ny amboa kely mba mihinana ny sombitsombiny latsaka avy amin’ny latabatry ny tompony ihany”. Dia namaly i Jesoa ka nanao taminy hoe: “Ravehivavy, lehibe ny finoanao, aoka ho tanteraka aminao araka izay irinao”. Dia sitrana tamin’izany ora izany ihany ny zanany vavy.